बुलाकी प्रिती आलेजीले लगाउनु भयो, चोट मेरो ओठमा लाग्यो : एकनारायण भण्डारी [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ सोमबार, असार २२, २०७७, १४:१३
एकनारायण भण्डारी फिल्म, आधुनिक र लोकगीत लेखन र संगीतमा चर्चित छन्। उनका धेरै गीत स्रोतामाझ जँचेका छन्। दर्जनौं लोकप्रिय गीतका सर्जक भण्डारीले हालसालै बजारमा ल्याएको ‘फरिया लरिलै बरिलै’ बोलको तीज गीत चर्चित भइरहेको छ। सँगै अघिल्ला गीतभन्दा केही बढी गाली पनि पाइरहेका छन्। गीतको म्युजिक भिडियोलाई लिएर केही दर्शकले आलोचना गरेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा भण्डारीसँग नेपाल लाइभले गरेको संवाद:
एकनारायणको गीत बजार अनुसार हैन। एकनारायणको गीतले आफै बजार बनाउँछ भन्थे। तर अहिले निकाल्नुभएको 'फरिया लरिलै बरिलै' गीतले भने एकनारायण बजारको पछि लाग्न थालेछन् भन्ने भनाइ आएको छ, यो सत्य हो?
अलिकति सत्य हो। पहिले पनि कहिले आफ्नो भावनातिर लागेको हो, कहिले माटोतिर लागेका हो र कहिले बाटोकाे पछि लागेकै हो। अहिले पनि कहिले केही बजारतिर लागेको हो। अहिले थोरै समयको प्रभावलाई समात्न खोजेको हो।
तपाईंकै युट्युबबाट गीत रिलिज भएको छ। उक्त गीतको भिडियोले धेरैलाई बिझाउँछ। गीतकारको रुपमा यो गीतको दृश्य यस्तो हुन्छ वा यो हदसम्म मात्रै भिडियो बनाउनुपर्छ भनेर किन सीमा नतोकिदिएको?
प्रिती आलेजीसँग अनलनइनमा गफ हुँदाहुँदै उहाँले दाइ मेरो लागि पनि गीत चाहियो भन्नुभयो। मैले प्रितीजीलाई तपाईंको गीत बोल्ड हुन्छ, मेरो शृंङ्गारिक हुन्छ भनें। हजुरले लेख्यो भने मलाई भइहाल्छ दाइ भनेपछि मैले यो गीत र लय उहाँलाई दिएको हो। गीत र लय मेरो हो। भिडियो उहाँले बनाउनु भएको हो।
पारिश्रमीक कति लिनुहुन्छ? भन्नुभएको थियो। सबै लकडाउनमा छौं पैसा पर्दैन ,मेरै युट्युब च्यानलमा राखौं भने। गीत र लयको जवाफदेही म हो। भिडियोको जिम्मा कसरी लिने र? यदि त्यसको जवाफ पनि मैले दिनैपर्ने हो भने मलाई यस्तो महसुस भएको छ– बुलाकी प्रितीजीले लगाउनु भयो, चोट मेरो ओठमा लाग्यो। खास भन्ने हो भने मलाई सुटिङ हेर्न एकदमै झ्याउ लाग्छ त्यो दिनमा पनि आधा सकिएपछि पुगेको थिएँ तर पुरै हेरेको थिइनँ। पछि हेरेपछि पहिरन त्यस्तो नलगाएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्यो।
चुनावताका तपाईंले ‘मै पनि एमाले सै पनि एमाले’ भन्ने गीत लेख्नु भयो। त्यसको गालीताली दुवै बद्री पंगेनीले पाउनुभयो तर, त्यो गीतमा चाहिँ गाली तपाईंको भागमा पर्‍यो है!
त्यही त गाली खानु भयो पनि उहाँले। फाइदा पनि उहाँले नै लिनु भएको होला। म आध्यात्मिक प्रकारको मान्छे हो। मैले गाली दिनेलाई पनि लाइक गरेको छु। गलत बाटोमा छु भने उहाँहरुको आलोचनाबाट फर्किनुपर्छ। गीत भनेको एउटा सर्जकका लागि नेता चुनावमा उठेजस्तै हो। जित्ने महत्वाकांक्षा हुन्छ। हार पनि हुन सक्छ।
त्यसैले मेरो यो तीज गीत अहिले चुनावमा उठेको छ। जित्यो भने ठीकै छ। म हार्दैमा पनि केही हुन्न। १७ वर्षको उमेरसम्म खाइनखाई हिँडियो। यो गीतमा बहिनीले गल्ती गरेको हो। मेरो ६ सय १ औं गीत हो यो। त्यसैले एउटा गीतका कारण मलाई धेरै गाली गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन।
तपाईंका अधिकांश गीतमा द्विअर्थी लाग्ने शब्द हुन्छन्। तपाईंको स्वभावै यस्तै हो कि कसैबाट प्रभावित?
म आफैं त्यस्तै हो। मैले कहाँबाट सिकें भनेर अनुसन्धान गरें आफैंमाथि। हजुरबुबाबाट रहेछ। हुजरबुबा अलि उटुंग्याहा स्वभावको हुनहुन्थ्यो। एउटा घटना सम्झिन्छु-हजुरबाले आज स्कुल नजा भन्नुभयो। मैले किन नजाने? भने। उहाँले मगरगाउँमा केरा खान जाने भन्नुभयो। अनि आमाले गाली गर्नुहुन्छ भन्थें। आमालाई पेट दुखेको भन, ज्वरो आयो भनिस् भने छामेर थाहा हुन्छ। मेलापात गएपछि जाउँला भन्नुभयो। मगरगाउँ गएपपछि भन्नु हुन्थ्यो-यो केटो केरा खान नपाएर स्कुल गएन। कोसँग छन् ल्याउ। यस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ।
शृंङ्गारिक हुन मोतीराम भट्टसँग सिकें। उहाँको एउटा लाइन छ-छिन्न चुरा बजे अनि उहाँ ब्युझिनु भो, नसोध संगिनीहरु त्यसपछि के भो? संगिनीले बिहेमा के हुन्छ भनेर सोध्दा दिएको उत्तर थियो यो। यसले छोयो र यही धार समाते। शृंङ्गारिक रसलाई मलजल गरेको छ। समाजले घटेको घटना र मनोभावना नै गीतमा आउने हुन्।
रोमान्टिक पनि उत्तिकै हुने। मेरो आँखामा आँशु सुहाउँछजस्ता अति निराशाका गीत पनि तपाईं नै लेख्नुहुन्छ!
जीवनको पाटो रैछ। हिँड्दै जाँदा फूलसँग आकर्षित भइयो भने एउटा चिज फुर्छ-मै राम्री कि राम्रो हो जवानी। फूल टिप्न खोज्दा काँडाले घोच्छ-तिम्रो फोटो हजारको नोटमा होस् लेख्छु। जीवनको प्रक्रिया रहेछ।
तपाईंको पहिचान लोक गीतमा छ। एकनारायणसँग राम्रो लोक गीतको अपेक्षा गर्छन्। त्यो अपेक्षा कहिलेकाहीँ यसैगरी टुक्रिन्छ। जानाजान हुन्छ वा कहिलेकाहीँ पर्न जान्छ?
दर्शक एउटा बाटोमा छन्। जीवनभन्दा टाढा धेरै कुरा खोज्नु हुन्न। धेरै आदर्शवादी हुनुहुन्न। चर्चित हुने चाहना सबैलाई हुन्छ। त्यतातिर लाग्दा कहिलेकाहीँ गल्ती हुन जान्छ। लाइसेन्स भएको मान्छेको गाडी पनि दुर्घटनामा पर्छ। कहिलेकाहीँ आफूले राम्रो अर्थमा बोलिन्छ, अर्को अर्थ लाग्न सक्छ। यो पनि कहीँकतै त्यस्तै भएको होला।
यही गीतमा एउटा शब्द छ ‘उरन्ठ्याउला केटाहरु डिस्टर्ब नगर’। तर, के देखियो भने उरन्ठ्याउला केटाहरुलाई पन्छाएर उरन्ठ्याउली केटी अगाडि ल्याएको जस्तो देखियो!
भिडियो र गायन शैलीले त्यस्तो अर्थ लाग्यो। बहिनीले लयमा अलिकति परिवर्तन गरेकी हुन्। उहाँको बोल्ड आउँदो रहेछ। पहिले ज्योती बहिनीसँग काम गर्दा पनि त्यस्तो आयो। सबै कुरा आफूले गरिँदैन। भिडियोमा म जान्न। त्यसले समस्या आएको हो। तर, व्यक्तिगत रुपमा गायनका हिसाबले यी दुवै बहिनी मलाई मन पर्छन्। उनीहरुको साधना पनि छ। कुरा के हो भने यो भिडियोबाट पनि शिक्षा पाएँ।
गीत लेखेपछि ताली पाइने है?
लोकगीत भन्नेबित्तिकै संकलन छैन। शब्द/संगीत भनेपछि बनाएको चिज हो। बनाएको चिजमा कमजोरी हुन्छ। हिजो ताली बजाएर आमाले गाउने गीतबाट आज यहाँ पुग्यो। प्रजापति दाइले पनि गाली खानु भयो। पछि राम्रो भयो। कोमल वली दिदीले पनि गाली खानु भयो। पशुपति शर्माजीले पनि गाली खानु भयो। दुर्गेश थापा भाइले पनि गाली खानु भयो तर राम्रै भयो कि क्या झैं लाउँछ।
मेरो कुरा गर्दा गाडा हेरेर गाडी बनाएको हो। अहिले गाउँमा जाँदा म लोकगीत भेट्दिनँ । बरु हामीले बनाएका र हिन्दी गीतमा नाचेको देख्छु।